Muxuu Cumar Cabdirashiid ka yiri doorashadii ka dhacday PUNTLAND? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Muxuu Cumar Cabdirashiid ka yiri doorashadii ka dhacday PUNTLAND?
Muxuu Cumar Cabdirashiid ka yiri doorashadii ka dhacday PUNTLAND?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa si adag uga falceiyey doorashadii xubnaha Golaha Shacabka ee shalay lagu qabtay gudaha magaalada Garoowe.
Cumar Cabdirashiid ayaa walaac xoogan ka muujiyey doorashadaas, isaga oo su’aallo badan ka keenay, gaar ahaan waxa kalifay in doorashada lagu qbato xero ciidan dhexdeeda.
Sidoo kale wuxuu su’aallo kale ka keenay sida guddiga doorashooyinka u wejihi karo arrimahan iyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo.
“Haddii doorasho lagu qabto xeryo ciidan, waa maxay khatarta ah in FEAT ay si cad u wajahdo sharci-darradaas. Yaan kula xisaabtameynaa liiskan dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee muuqda,” ayuu ku yiri qoraalka uu saaray Cumar Cabdirashiid.
Dhinaca kale wuxuu tilmaamay in dhacdooyinkan aad uga argagax badan yihiin wixii ay horay uga baqayeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka ah doorashada socota.
“Xaqiiqadu waxay u muuqataa mid aad uga argagax badan wixii aan horay uga baqaynay,” ayuu sii raaciyey, ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Doorashada ka dhacday magaalada Garoowe oo ah tii ugu horreysay xubnaha Puntland ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa aad loo dhaliilay, waxaana xubnaha la doortay ay aad ugu dhow yihiin madaxweynaha maamulkaasi, Mudane Saciid Cabdullaahi Maxamed (Deni).
Arrimahan oo idil ayaa kusoo aadayo, kadib heshiiskii Muqdisho ee Golaha Wadatshiga Qaran, kaas oo lagu caddeeyey in wax laga beddalo hannaanka doorashada oo ay cabasho ka keeneen mucaaradka, laguna go’aamiyey in la soo gabagabeeyo 25 Feberaayo ee 2022.
Manchester City oo qorsheyneyso inay heshiis cusub ka saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe...
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay heshiis cusub ka saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rodri dhamaadka sanadka. 26-sano jirkaan lynchpin ayaa ka mid ahaa...
Rooble oo ku adkeystay inay lama taabtaan tahay Kiiska baaritaanka Dilka...
I Will Do All Graphics Design and Book Cover Designs Using...
Faysal Cali Waraabe oo weerar ku qaaday Soomaaliya iyo xulafada Fahad...
Maxaa Ka jira In MD Xasan Sheekh La doonayay In La...
Mareykanka oo dacwad kusoo oogay Senator loo heysto dilka madaxweynihii Haiti
Koonfur Galbeed qaaday tallaabo ay ku soo gaba-gabeyneyso doorashada Baraawe